India: Indostrian’ny diamondra mandalo krizy, mpiasa 71 namono tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2018 11:58 GMT
Sary tao amin'ny Flickr an'i swamibu
Nofinà diamondra avy amin'i Swamibu
Manambara ny fahasarotana atrehan'ireo mpamotsy diamondra ao Gujarat ao India amin'ny alalan'ny sary sy fijoroana vavolombelona ireto lahatsary manaraka ireto. Eny tokoa, misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatra misy azy ireo ny fihemorana sy ny krizy ara-toekarena manerana ny tany ary ankehitriny, an'arivony izy ireo no voaroaka. Noho izany, tsy afaka mamelona ny fianakaviany, mandoa ny faktiorany na koa mandoa ny fianaran'ny zanany ary tsy maintsy mionona amin'ny fivelomana isanandro fotsiny izy ireo. Maro no tsy mahita vahaolana hafa ankoatra ny famonoantena. Manazava ny asan'ireo mpamotsy diamondra ao Surat ao amin'ny fanjakana indiana any Gujarat ny lahatsary iray amin'ny teny anglisy sy indianina, nampiakarin'ny mpianatry ny Indian Institute of Management Ahmedabad (Ivontoerana Indianina ao Ahmedabad momba ny Varotra ) ho ety anaty tambajotra tao anatin'ny fianarana ny tontolo iainana ara-tsosialy sy ara-kolotsaina momba ny raharaham-barotra. Manazava ihany koa ny fomba nahavoahilika ireo mpamotsy ireo tamin'ny fikarakaràna diamondra izy, izay niteraka ny fanjavonan'ireo orinasa mpamotsy diamondra izay tena velona be taloha mba hanoloana azy ireo amin'ny resaka amboradara izay tsy misy fantatr'izy ireo ny momba azy na dia kely aza. Tsy maintsy manaiky asa any amin'ny sehatra hafa ireo mpiasa tena manana fahaizana ambony ireo, izay ahazoany karama kely noho ny taloha. Noho ny tsy fahafahany mandoa ny saram-pianarana, lasa tsy afaka manao fanadinana ireo zanany izay nianatra tany amin'ny fianarana fantadaza taloha :
Somary mampiahiahy ny toe-javatra ao Surat satria eo amin'ny 50%-n'ireo mpandidy sy mpamotsy diamondra no tsy an'asa hatramin'izao [amin'ny teny anglisy]. Miezaka ny mitady vatsim-pianarana ho an'ny zanak'ireo mpiasa ireo ny fanjakana mba hahafahan'ireto farany manohy ny fianarany. Nisy matoandahatsoratra momba izany tao amin'ny blaogy iray nampiantranoan'ny Hindustan Times :
Tena miha mahazo toerana hafa mihitsy ny krizy mananontanona ao Surat : raha toa ka any amin'ny faritra hafa, afaka manantena ny fianakaviana mba hanampy azy ireo mpiasa very asa, aty kosa tena fianakaviana iray manontolo mihitsy no miasa ao amin'ny fikarakaràna diamondra ary mety ho very asa avokoa sy ho tapaka karama tanteraka ihany koa amin'izany fotoana izany ireo mpiasa ireo.
Noresahana ao amin'ny tranonkala Aterineto Pragoti.org ny mikasika ny trangana famonoantena nataonà olona miisa 71 noho ny krizy mitranga ao amin'ny indostrian'ny diamondra :
Na dia faly ampahibemaso amin'ireo famatsiambola aza ny mpomba ny lehiben'ny governemantan'ny fanjakan'i Gujarat, i Narendra Modi, tsy latsaky ny 71 ireo mpamotsy diamondra namono tena tao amin'ny fanjakan'i Gujarat nandritra izay volana vitsivitsy izay, taorian'ny nandroahana azy noho ny fihemorana manerantany nahazo ny indostrian'ny diamondra. Nolavin'ny filoha Modi, izay tia miseho ho toy ny ‘olontsotra’, ny hanohana ireo mpiasa ao amin'ny indostrian'ny diamondra, izay tsy afa-bela amin'ireo mpivarotra fetsifetsy…
… Ankoatra ireo famonoan-tena 71 tao amin'ny fanjakan'i Gujarat, tena lasa sarotra be ny toe-javatra iainan'ireo mpiasa ao amin'ny sehatry ny diamondra ka tena nisy fifanosehana mihitsy teo alohan'ny Fikambanan'ny Diamondra ao Surat, izay nizaràna ny taratasy ahafahana tsy mandoa ny saram-pianarana.
Asakanto tena ilàna fikaliana fatratra ny famotsiana diamondra mamadika vato voajanahary ho vato sarobidy hankafizin'ireo mpivarotra firavaka manerana ny tany. Ao anatin’ity lahatsary manaraka ity, izay ampahany amin'ilay horonantsary fanadihadiana ao amin'ny aterineto ”Ny lalan'ny diamondra” [tandremo, tsy nataoko ato ny rohy satria toa misy viriosy ilay tranonkala], afaka isika mahita lehilahy mpiofana ho mpamotsy izay sambany no miasa amin'ny diamondrany voalohany taorian'ny fifanarahana fiofanana mandritra ny telo volana izay tsy misy karama [amin'ny teny anglisy]:
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny indostrian'ny diamondra ianao, manolotra ny orinasa fikarakarana diamondra “Sanghavi Diamond” i Jobanputra ary manazava ny asa fandidiana ilay vato voajanahary ho vato sarobidy ao anatin’ity lahatsary manaraka ity. Ao amin'ny fitsidihana feno ny orinasa, mizara ho lahatsary efatra [amin'ny teny anglisy], hazavainy ireo fomba tsara indrindra, ary koa ny hoe tsy mampiasa ankizy ilay orinasa sady manome antoka fa manana fanamarihana azo atokisana ireo diamondra ireo ary tsy ”diamondran'ny ady”.
Kitiho eto mba hijerena ireo lahatsary 2, lahatsary 3, ary lahatsary 4 amin'ilay horonantsary fanadihadiana ”Ny Lalan'ny Diamondra” [amin'ny teny anglisy].